Tue, Jul 14, 2020 at 7:12am
निगमले होलीको बिदामा पनि ग्याँस आयात गर्ने
काठमाडाैं,२६ फागुन। अहिले कोरोना भाइरसको जोखिमले राजधानीलगायत मुलुकभरका उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर भर्न लाइनमा बस्न थालेपछि नेपाल आयल निगमले होलीको बिदामा पनि ग्याँस आयात गर्ने भएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले काठमाडौं उपत्यकालगायतमा उपभोक्ताको मागलाई पूरा गरी उपभोक्तामा रहेको आवश्यक बेलामा नपाइनसक्ने त्रास चिर्न होलीको बिदाको दिन पनि ग्याँस आयात गर्न लागिएको हो । अहिलेको बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव चिर्नकै लागि..
नाका नागढुंगा–कलंकी सडकमा आकासे पुल
काठमाडाैं,२६ फागुन। काठमाडौंबाट बाहिरिने र उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगा–कलंकी सडकखण्डमा आकासे पुल बन्ने भएको छ संघ सरकारअन्तर्गत सो सडकखण्ड भए पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले आकासे पुल निर्माण गर्ने भएको हो । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा आकासे पुल निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । सर्वसाधारणलाई बाटो काट्न सहजताका लागि आकासे पुल निर्माण गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले आकासे..
आहा रारा गोल्डकप: मनाङ मस्र्याङदी सेमिफाइनलमा
काठमाडाैं,२६ फागुन।मनाङ मस्र्याङदी क्लब पोखरामा जारी १८औँ संस्करणको आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । आइतबार झापा–११ फुटबल क्लबमाथि १–० को साँघुरो अन्तरको जित निकाल्दै मनाङ प्रतियोगिताको अन्तिम चारमा प्रवेश गर्न सफल भयो । प्रतिस्पर्धात्मक खेलको पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा टुङ्गिएकामा खेलको ७६औँ मिनेटमा अन्जन विष्टको गोलमार्फत मनाङले खेलमा अग्रता लियो । मैदानको दायाँ भागबाट आएको बललाई विष्टले डिबक्स..
तीनमहिने सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै नेकपा
काठमाडाैं,२६ फागुन। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी तनहुँले तीनमहिने सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीको हालै सम्पन्न तेस्रो पूर्ण बैठकले आगामी चैत १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म पार्टी एकता सुदृढीकरण तथा जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीको तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तामा उत्साह भर्न र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको पार्टीका जिल्ला..
ओलीले वामदेवलाई रोकेरै छाड्ने
काठमाडौं, २५ फागुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई कुनै हालतमा राष्ट्रियसभा सदस्य हुन नदिने गरी प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष लागेको छ । ओली मृगौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल जानुअघि नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनितका लागि सरकारबाट सिफारिश गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । तर, ओली अस्पतालको शैयामै रहेको अवस्थामा उनी निकटस्थ सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री..
पशुपति परिसरमा झाडु बोकेर सफाइमा जुटे पूर्वयुवराज पारस
काठमाडौं, २५ फागुन । प्रेम सम्बन्ध हाेस् या अरू कुनै काम पूर्वयुवराज पारस शाह यस्ता विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहेका हन्छन् । उनको सामान्य गतिविधिले पनि सामाजिक सञ्जालमा ठूलो रुप लिने गर्छ । उनको पक्ष र विपक्षमा धेरै बहस हुने गर्छ । यस्तै अहिले उनकाे पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा झाडु बोकेर सफाइमा जुटेकाे तस्विरले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएकाे छ । शनिबार नयाँ हुलियामा देखिएका पारसको पनि अहिले..
गृहको निर्देशन : ‘लोला नहान्नू, रङ नखेल्नू, खाद्यान्न नथुपार्नू’
काठमाडौँ, २४ फागुन नेपाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को उच्च जोखिममा रहेको हुँदा होली खेल्दा विशेष सावधानी अपनाउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै होलीमा विगतको जस्तो भिडभाडमा नजान र लोला फ्याँक्ने, शरिरमा रंग दल्ने लगायतका काम जोखिमपूर्ण हुने हँदा त्यसो नगर्न अपिल गरेको हो। गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढी भिडभाड हुने प्रकृतिको कुनै पनि सभा, सम्मेलन,..
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले गरे प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभ कामना
काठमाडौं, २४ फागुन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार एक सन्देश पठाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण भएको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका हुन्। सन्देशमा उनले चीन सरकार, चिनियाँ नागरिक र स्वयम् आफ्नातर्फबाट प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति..
बजारमा ग्यास अभाव हुँदैन : निगम
काठमाडौं, २४ फागुन नेपाल आयल निगम बजारको माग भन्दा बढी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ग्याँस अभाव नहुने स्पष्ट पारेको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निगमले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो। हाल खाना पकाउने ग्याँस उपभोगको औषत परिमाण ३८ हजार मेट्रिक टन रहेको र यसै महिनादेखि निगमले ४५ हजार मेट्रिक टनका दरले आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाईसकेको निगमले बताएको हो। थप ७ हजार..
मुद्दा हारेपछि अन्ततः पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा तयार भइन् ट्रष्टको जग्गा छाड्न
काठमाडाैं, २४ फागुन । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाह मुद्दा हारेपछि ट्रष्टको जग्गा छाड्न तयार भएकी छिन् । नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौं छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा छाड्न पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाह अन्ततः तयार भएकी हुन् । हकदाबी गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएपछि उनी सरकारी संरचनासहितको जग्गा छाड्न तयार भएकी हुन् । तर, उनले यसका लागि सरकारसँग थप समय मागेकी छिन् । गत ४ माघमा ट्रस्ट कार्यालयले..
आन्तरिक उडानमा चार अर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी
काठमाडाैं,२४ फागुन। आन्तरिक उडान भर्दै आएका एयरलाइन्सको संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले विदेशी पर्यटकको आवागमनमा करिब ४० प्रतिशतले कटौती आएसँगै यस उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु वायुसेवा र हेलिकप्टर उडानमा यसले प्रत्यक्ष असर गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेपछि भ्रमणका लागि नेपाल आउन पर्यटक हिचकिचाइरहेको संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले जानकारी दिए।..
गृहमन्त्रीको निर्देशन: कालोबजारी राेक्नुहाेस्
काठमाडौं,२४ फागुन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमा नाकामा कडाइसँगै निगरानी बढाउन निर्देशन दिएका छन्। कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा सहजीकरण समिति बैठकमा थापाले शुक्रबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकको अध्यक्षता गरेका थापाले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई सीमाका बीओपीलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिए। उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई बजारमा कालोबजारी हुन नदिन विशेष सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएका थिए। बैठकले कोरोना भाइरस..
कोरोना भाइरस : नियन्त्रणका लागि सरकारका तीन तहबीच समन्वय
काठमाण्डौ, २३ फागुन सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले सबै तहसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेकाे बताउनुभएको हो । कोरोना भाइरस प्रवेश गर्न नदिने, सावधानी अपनाउने, मध्यम खालको स्थितीमा कसरी जोगिने र अति जोखिममा पुग्दाको संभावित अवस्थाबारे आकलन गरेर त्यसै अनुसार तयारी गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न..
अझैँ एक साता अस्पतालमै रहन प्रधानन्त्री ओली
काठमाडाैं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई अझै एक सातासम्म अस्पतालमै राखिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक दिव्या सिंह शाहले ओलीलाई चार दिनपछि डिस्चार्ज गर्न सकिने भएपनि भेटघाट कम गराउन एक सातापछि मात्र डिस्चार्ज गराउन लागिएको बताइन्। प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। ‌ओलीको स्वास्थ्य अहिले खतरामुक्त रहेको शाहले जानकारी दिइन्। ‘स्वास्थ्य खतरामुक्त छ तर अझै संक्रमणको..
भारी वर्षाक, हावाहुरी र चट्याङको सम्भावना
काठमाडाैं,२३ फागुन। हावाहुरी/चट्याङ/असिनासहित आज (शुक्रबार)प्रिमनसुन लागेयताकै ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् गंगा नगरकोटीका अनुसार स्थानीय वायुमा पश्चिमी वायुसमेत मिसिएकाले आज अलि ठूलै वर्षा हुने सम्भावना देखिएको हो। साथै हावाहुरी आउने, चट्याङ र असिना पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको उनले बताइन्। ‘यो प्रि-मनसुनका बेला खासगरी स्थानीय वायुको प्रभावले मौसम बदली हुन्छ, तर पश्चिमी वायुसमेत मिसिँदा मौसमी प्रणाली..
लसुनको भाउ फेरी बढ्यो (शुक्रवारकाे तरकारीको मुल्य)
शुक्रवार काठमाण्डौमा तरकारीको मुल्य अन्य दिन जस्तै सामान्य रुपमा घटबढ भएको छ । कालिमाटी तरकारी बजारका अनुसार आज सबै भन्दा बढि मुल्यमा सेलरी,पार्सल प्रतिकिलो ४५० ,लसुन ४०० र पुदिना ३२० मा किनबेच भइरहेको छ । त्यस्तै कालीमाटी तरकारी बजारमा नेपाली ठूलो गालभेडा र भारतीय ठूलो गोलभेडाको अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै भेडे खुर्सानी १०० लसुन हरियो १३० हरियो..
चर्चित ब्राजिलियन फुटबलर रोनाल्डिन्हो पक्राउ
काठमाडाै,२३ फागुन। चर्चित ब्राजिलियन फुटबलर रोनाल्डिन्हो पाराग्वेमा पक्राउ परेका छन् । नक्कली दस्तावेज प्रयोग गरेर दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा प्रवेश गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन् । सन् २००२ को विश्वकप विजेता ३९ वर्षीय खेलाडीलाई रिसोर्ट याच एन्ड गल्फ क्लब पारागुयायोबाट भाइ रोबर्टोसँगै बुधबार राति पक्राउ गरिएको पाराग्वेको गृह मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । ला नासियोनका अनुसार उनी र रोबर्टो पाराग्वेन नागरिक बनेर..
बलात्कारका आरोपी सांसद रावल चार दिन थुनामै
काठमाडौं,२३ फागुन। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद अक्कल रावललाई जिल्ला अदालत कैलालीले ४ दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । धनगढीको उत्तरबेहडी बस्दै आएकी एक महिलाले आफूमाथि बलात्कार प्रयास गरेको उजुरी दिएपछि रावल पक्राउ परेका थिए । बुधबार अबेर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका रावललाई बिहीबार म्याद थप्न जिल्ला अदालत लगिएको थियो । “अदालतसँग १० दिन म्याद थपको आदेश माग गरेका..
भ्रष्टाचार मुद्दामा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि पियनसम्म
काठमाडौं,२३ फागुन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षले घुस लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जाजरकोट जुनीचाँदे गाउाँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी र ५ का वडाअध्यक्ष राजहादुर शाहीविरुद्ध २५ लाख ५० हजार बिगो कागम गरी आरेपपत्र दर्ता गरेको हो । अध्यक्ष केसीले कमिसन माग्दै धम्कीसमेत दिई पटकपटक नगद र बैंक खातामा रकम लिएको अख्तियारको दाबी..
कोरोनाकाे त्रास बढ्दाे, जाेखिम राेक्ने प्रयासमा सरकार
काठमाडाैं,२२ फागुन नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्‌क्रमण विश्वभर देखिएसँगै नेपालमा पनि यसको त्रास फैलिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्‌गठनले नेपाललाई कोरोना सङ्‌क्रमणको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राखेपछि त्रास अझ बढेको हो। नेपालमा हालसम्म एक जनाबाहेक अन्य व्यक्तिमा कोरोनाको सङ्‌क्रमण देखिएको छैन। कोरोना जाँच गरिएकामध्ये ‘पोजेटिभ’ देखिएका ती व्यक्ति पनि उपचारपछि कोरोनामुक्त भइसकेका छन्। कोराना सङ्‌क्रमणको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाउन..
३९ मिनेटमा जोडियो प्रधानमन्त्रीको नयाँ मिर्गौला
काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको छ । उनकाे नयाँ मृगाैला जाेड्न ३९ मिनेट लागेकाे उपचारमा संलग्न प्रा.डा. प्रेम ज्ञवालीले बताए । प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार यो सफल प्रत्यारोपण हो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा प्रधानमन्त्री ओलीको बुधबार दोस्रोपल्ट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । उनलाई भान्जी समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला प्रदान गरेकी हुन् । पहिलोपल्ट २०६४ सालमा भारतमा..
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीले भने– म ठीक छु!
काठमाडाैं,२२ फागुन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा.डा.प्रेम ज्ञवाली र प्रा.डा. उत्तमकुमार शर्माको नेतृत्वमा बुधबार साढे चार घन्टा लगाएर मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र मिर्गौलादाता समीक्षा संग्रौला दुवैको स्वास्थ्य सन्तोषजनक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । साँझ ओलीलाई होस आएको छ । शल्यक्रिया गरेका डा.ज्ञवालीले भने, ‘होसमा त साँझ (बुधबार) नै आउनुभएको..
नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण सुचारु
काठमाडाैं,२२ फागुन। बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुचारु भएको छ । सुरुङ मार्गको धादिङतर्फको जग्गा विवादको सम्बन्धमा स्थानीयवासीसँग सहमति भएपछि निर्माण कार्य सुचारु भएको हो । मुआब्जा विवादका कारण विगत चार महिनादेखि सुरुङ मार्गको धादिङतर्फको निर्माण कार्य अवरुद्ध रहेको थियो । धादिङका प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि त्रिपाठी, सडक विभाग वैदेशिक सहयोग कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजङ थापा, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना प्रमुख श्यामप्रसाद..
उत्पादक संघले गर्याे औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने माग
काठमाडाैं,२२ फागुन। कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्दा र आपूर्ति असहज हुँदै गएकाले नेपाल औषधि उत्पादक संघले सरकारसमक्ष औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाएको छ । संघले अघिल्लो शुक्रवार औषधि व्यवस्था विभागलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको बताउँदै नेपालमा औषधिको नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने पत्र पठाएको हो । औषधिको मूल्य सरकारले तोक्ने भएकाले मूल्य निर्धारण समितिलाई सक्रिय..
Results 9851: You are at page 32 of 329